Ubusela kwisithiyelo kubalobi | Martech Zone
Ukuba isiLilo kubalobi
NgoLwesithathu, Matshi 21, 2007 NgeCawa, nge-21 kaJanuwari 2018 Douglas Karr
Ngaba ukhe waya kuloba apho uhlala ulahla umgca wakho kwaye emva kwemizuzu embalwa isithiyelo sakho simkile? Ekugqibeleni, ukhetha umgca wakho uye kwenye indawo, akunjalo?
Ungathini xa sisebenzise oku kubuChwephesha? Mhlawumbi wonke umntu ofumana i-imeyile yobuqhetseba kufuneka enqakraze kwikhonkco kwaye afake ulwazi olubi ekungeneni okanye kwiKhadi letyala iimfuno. Mhlawumbi kuya kufuneka sizoyise iiseva zabo zizithuthi ezininzi kangangokuba bancame!
Ngaba ayizukuba yinto yokuzikhusela ngakumbi kunokuzama nje ukubona iindawo zobuGcisa kunye nokuthintela abantu kuzo?
Ngoku ka Wikipedia: Kwikhompyuter, ubuqhetseba ngumsebenzi wolwaphulo-mthetho kusetyenziswa iindlela zobunjineli kwezentlalo.  Abalobi bazama ngobuqhetseba ukufumana ulwazi olubuthathaka, olufana namagama abasebenzisi, iiphasiwedi kunye neenkcukacha zekhadi letyala, ngokuzenza njengeziko elithembekileyo kunxibelelwano lwe-elektroniki. I-Ebay kunye nePaypal zezona nkampani zijolise kuzo, kwaye iibhanki ezikwi-Intanethi nazo ziithagethi eziqhelekileyo. Ubuqhetseba buqhelekile kusetyenziswa i-imeyile okanye umyalezo okhawulezileyo,  kwaye uhlala uqondisa abasebenzisi kwiwebhusayithi, nangona umnxeba usetyenzisiwe nawo.  Imizamo yokujongana nenani elikhulayo leziganeko zobuqhetseba kubandakanya umthetho, uqeqesho lwabasebenzisi, kunye nemilinganiselo yezobugcisa.
Ndifuna ukwazi ukuba iyasebenza na le nto. Ingxelo?
Nantsi i-imeyile yobuqhetseba endiyifumana yonke imihla kwi-imeyile yam:
Ndinqwenela ukuba ndingabaphazamisa aba bantu. Ngendlela, iFirefox yenza umsebenzi olungileyo wokuchonga ezi ndawo:
Ngelixa ungenako ukuthintela nabani na ukuba angaphazamisi inkampani yakho kwi-imeyile yobuqhetseba, unokuqinisekisa ukuba ii-ISPs eziqinisekisa ukuhanjiswa kwakho ngaphambi kokuba zivunyelwe kwibhokisi engenayo ayinakuqinisekisa ngemvelaphi yazo. Oku kufezekisiwe ngokumiliselwa kwe ungqinisiso lwe-imeyile izikhokelo ezinje SPF kwaye I-DMARC.
tags: I-DMARCungqinisiso lwe-imeyileubuqhetsebaspfIirekhodi ze-spf
Ngaba Uyabakhuthaza okanye Uyabatyhafisa Abafundi Bakho?
Yeka Ukubhala kwii-Injini zokuKhangela